भक्ती दर्शन टेलिभिजन » कसको दोहोरो व्यवहारले सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू आक्रोशित ? Free songs
कसको दोहोरो व्यवहारले सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू आक्रोशित ?
tag : bag-durbar
काठमाडौं, २९ असार । सुन्धारास्थित बागदरबार भत्काएर काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सय वर्ष पुरानो सम्पदा सूचीमा पर्ने यो दरबार भत्काउन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पुरातत्व विभागले बोली फेरेको छ।
आठ महिनाअघि विभागले दरबार नभत्काउन महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो। २०७४ कात्तिक १५ गते महानगरलाई लेखेको पत्रमा ‘दरबारको भित्री जग बलियो रहेको र सबलीकरण रेट्रोफिटिङ गर्न सकिने’ उल्लेख छ।
उक्त निर्देशनपछि बागदरबार भत्काउन तम्सिएको महानगर पछि हटेको थियो। अहिले आएर पुरातत्व पनि महानगरसँगै हात मिलाउन थालेको छ।
उसले यही जेठ १५ गते महानगरलाई अर्को पत्र लेखेर ‘दरबारको मौलिक स्वरुप परिवर्तन नगरी परम्परागत शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न भनेको छ। सुरुआतमा दरबारको महत्व वर्णन गर्दै संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको पुरातत्वले भत्काउने अनुमति दिनु शंकास्पद रहेको सम्पदा संरक्षण अभियन्ता बताउँछन्। पुरातत्वको दोहोरो व्यवहारले उनीहरू आक्रोशित बनेकाछन्।
पुरातत्व संरक्षण ऐनमा सय वर्ष पुरानो भवन एवं सम्पदा जगेर्ना गर्नुपर्ने नियम रहेको बताउदै सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले यसै सम्बन्धमा पुरातत्व विभागका इन्जिनियरसंग बागदरबार पुनर्निर्माण गर्न अनुमति दिनुको कारणबारे गरेको प्रश्नमा उनले महानगर कार्यालयमा सर्वसाधारण र कर्मचारीको बाक्लो आउजाउ हुने भएकाले भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै जोखिमपूर्ण देखेर मौलिक स्वरुप परिवर्तन नगर्ने गरी पुनर्निर्माण गर्न खोजिएको तर्क गरेका
छन् । पुरातात्विक महत्वका भवन पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक स्वरुप जस्ताको तस्तै नरहने भएकोले संसारभरि रेट्रोफिटिङ गरेर सम्पदा संरक्षण गरिँदै आएको बताउँदै पुरातत्व र महानगरको यस्तै रवैया रहे पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको अवशेषसम्म बाँकी नरहने भन्दै संम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरुले आलोचना गरेकाछन् । बागदरबारलाई रेट्रोफिट गरेर जोगाउन सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।